Saacadaha ugu wanaagsan ee Shiinaha ee Sebtember 2021 | Androidsis
Jose Alfocea | | Shiinaha Shiinaha, Smartwatch
Ma waxaad ka fikireysaa cusbooneysii saacaddii hore ee smart mid leh astaamo ka fiican oo naqshad casri ah oo soo jiidasho leh, laakiin aadan rabin in lagaa tago iyadoo jeebkaagu qaawan yahay? Miyaad ku jiitay fikradda ah inaad haysato saacad-saacadeed laakiin weli kuma qanacsanid inaad sida ugu fiican u heli doontid sidaa darteedna ma doonaysid inaad lacag badan geliso waayo-aragnimada? Haddii aad isku aragtid labadan xaaladood midkood, markaa waxaad timid meesha ugu habboon.
Maanta barnaamijka 'Androidsis' waxaan kuugu keenaynaa soo jeedin qaar ka mid ah ugu fiican smartwatches Shiinaha. Haa, waan ogahay in inta badan saacadaha casriga ah, taleefannada gacanta iyo aaladaha kale ee tikniyoolajiyada ay yihiin wax soo saar Shiinaha (ama guud ahaan bariga), hase yeeshe halkan waxaan ula jeednaa smartwatches-ka Shiinaha ee lagu sameeyo Shiinaha oo lagu iibiyo noocyo ka soo jeeda Shiinaha. Iyo sidoo kale, sida aad qiyaasi karto, waxay ku saabsan tahay smartwatch xoogaa ka raqiisan sida caadiga ah, in kasta oo aan mar horeba kuu sheegayo inaan wax badan lagu hogaamin doonin qiimaha. Ma rabtaa inaad ogaato moodooyinka aan ka hadlayno? Hagaag, aqriso.
1 Saacadaha casriga ee Shiinaha ee loogu talagalay dhammaan miisaaniyadaha
1.7 Dharka dharka King KW88
1.9 Xakamaynta KW18
Saacadaha casriga ee Shiinaha ee loogu talagalay dhammaan miisaaniyadaha
Smartwatch, 1.69 "Daawo ...
Cafimat Fican ...
ECG Smartwatch, Dhiig ...
At Androidsis waxaan sii wadaynaa inaan go'aansano inaan ku tusno alaabada ugu fiican suuqa iyo, wax walba oo ka sarreeya, kuwa leh qiime ka fiican lacag ama, sida xaaladdan oo kale, smartwatches Shiinaha oo u muuqda inay ka jaban yihiin. Sida iska cad kuwan waa soo jeedin kaliya maxaa yeelay, sidaad qiyaasi karto, garan mayno gabi ahaanba moodooyinka ka jira suuqa. Intaa waxaa dheer, bil kasta moodooyin cusub ayaa la bilaabay, cusbooneysiinta saacadaha horay u jiray suuqa, iyo xitaa noocyo cusub oo, xitaa aan u hureyn boqol boqolkiiba waqtigeenna, waan baari karnaa, tijaabin karnaa. Sidaa darteed, maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa xulasho ugu fiican smartwatches Shiinaha Iyada oo ku saleysan shuruudaha sida naqshadeynta, walxaha ay soo saareen, iska caabbintooda iyo ismaamulkooda, dareemayaasha iyo, ugu dambeyntiina, dhinacyada farsamada ee ujeeddada laga leeyahay ay tahay in lagu go'aamiyo in saacadda smartwatch qaarkood ay ku habboon tahay baahiyaheenna, sidoo kale halkan waxaan ku tusaynaa sida conkoobka smartwatch Shiinaha markaa dhib kuma qabtid isla marka aad heshoba. Marka, adoon sii dheerayn, aan bilowno.
Waxay u badan tahay inaysan kuugu muuqan wax badan adiga, hase yeeshee tan No.1 D5 + es mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican marka la eego qiimaha lacagta inaad ka heli karto suuqa hadda jira iyo, tan ugu muhiimsan, oo ay aad u qiimeeyaan kuwa isticmaala.
No.1 D5 + wuxuu leeyahay naqshad quruxsan oo aan rasmi ahayn, jirka birta iyo shaashad IPS ah oo 1,3-inji ah iyo xallinta 360 x 360. Gudaha waxaa ku jira Mediatek MTK6580 processor oo ay weheliso 1 GB oo xusuusta RAM ah iyo 8 GB oo kaydinta gudaha ah Miisaanka oo kaliya 78 garaam, oo ku filan in lagu daro a 450 mAh baytariga Taas oo aad ku sii socon karto maalinta oo dhan inkasta, dabcan, taasi waxay ku xirnaan doontaa xag-jir isticmaalka weyn ama ka yar ee aad siiso saacaddaada. Mid ka mid ah astaamaheeda ugu fiican ayaa ah inay ku jirto kaarka SIM-ka, taas oo ah, waxay bixisaa 3G isku xirnaanta markaa waad isticmaali kartaa xitaa haddii taleefankaaga casriga ahi guriga joogo. GPS, dareeraha garaaca garaaca wadnaha ayaa ah qaar ka mid ah qaybaha dhammaystiraya saacaddan casriga ah, marka lagu daro, ay tahay ciidda iyo biyaha u adkaysta.
Qaarkiin ayaa laga yaabaa inay u maleeyaan inaan ku gilgiley No.1 D5 + laakiin runtii, waa mid ka mid ah smartwatches-ka ugu fiican Shiinaha, in kastoo aysan dhab ahaan ugu jabaneyn. Si loo magdhabo, waxaan dooneynaa inaan u boodno xulasho aad u jaban laakiin tayo wanaagsan leh, the NeeCoo V3, saacad caqli badan oo leh a naqshad aad u qurux badan la jaan qaada labada qalab ee Android iyo iPhone, sidoo kale laga sameeyay bir (magnesium iyo aluminium daawaha) oo leh suun maqaar ah iyo shaashad 1,3-inji ah oo IPS ah oo leh 240 x 240 xallinta, Bluetooth 4.0, 380 mAh baytariga. Culeyskiisu waa 64 garaam oo keli ah in kasta oo uusan biyuhu ahayn, haddana wuxuu leeyahay qiime macquul ah oo ka yar toddobaatan yuuro. Iyada oo aad la socon karto dhammaan dhaqdhaqaaqa jirkaaga, aad ku hesho ogeysiisyo iyo waxyaabo kale oo badan.
Ikhtiyaar kale oo heer sare ah, gaar ahaan kuwa shaki badan ka qabo haysashada ama aan lahayn saacad caqli gal ah oo waliba miisaaniyad adag leh, waa tan MallTEK maxaad heli kartaa kaliya 25 euro. U ekaanta ay u egtahay Apple Watch way muuqataa in kastoo aysan gaarin tayada iyo waxqabadka taas, waxay leedahay qaabab u xiiso badan sida isku xirnaanta mobilada. Haa, MallTEK-kan waxaa loo isticmaali karaa kaar SIM ah, iyadoo laga tegayo taleefannada casriga ah, laakiin sidoo kale waxay bixisaa shaashad 1,54-inji ah oo leh xallinta 240 x 240. 380 mAh baytariga, kamarad oo kaliya culeyskiisu yahay 62 garaam. Ma rabtaa inaad soo gasho adduunka smartwatch? Hagaag, tani waa ikhtiyaar wanaagsan oo aad kuheli karto sedex dhameystir, lacag, madow iyo casaan.
Laakiin haddii aad la dhacsan tahay naqshadeynta saacadda tufaaxa oo aadan diyaar u aheyn inaad bixiso waxa dadka Cupertino weydiistaan, tan IWO 3 haa waa isku mid dhab ah oo Apple Watch ah, oo ay ku jiraan Digital Crown-ka dhinaca. Wuxuu la jaan qaadi karaa taleefannada casriga ah ee IOS iyo Android labadaba wuxuuna leeyahay shaashad IPS-1,54-inch ah iyo xallinta 240 x 240. Gudaha waxaa ku jira processor-ka MediaTek MTK2502C oo ay wehliyaan 138 MB oo RAM ah, 64 MB oo keyd ah iyo batteri dhan 350 mAh. Way iska cadahay inay aad uga liidato qalabka iyo softiweerka Apple Watch, laakiin waa macquul in la fiiriyo qiimaheeda. Waxaan ku adkeysaneynaa, kani waa smartwatch Shiinaha ah gaar ahaan ku habboon kuwa doonaya nashqad ka badan shaqeynta inkasta oo aad sidoo kale la socon karto dhaqdhaqaaqaaga jimicsi oo aad heli karto ogeysiisyo.
Dhameystiran ayaa ah tan kale ee saacadda tufaaxa oo xitaa ay ku jiraan kamarad iyo isku xirnaanta mobilada markaa waad sii wadi kartaa isticmaalkiisa xitaa haddii aadan haysan taleefankaaga casriga ah ee kuu dhow. Waxay ku saabsan tahay inta yar ee la yaqaan Wax alaab ah lama helin. kaas oo, qiimahoodu yahay toddobaatan yuuro oo keliya, oo bixiya, marka lagu daro kuwa aan kor kusoo sheegnay, shaashad dhan 1,54-inch 2.5D IPS ah iyo qaraar dhan 240 x 240, 320 mAh baytariga, bluetooth 4.0, Mediatek MTK2502 processor wuxuuna la jaan qaadayaa taleefannada casriga ah ee iPhone iyo Android.
Waxaan hadda u jeesaneynaa inaan ka hadalno laba saacadood oo Shiineys ah oo laga yaabo inaysan ka raqiisanayn kuwii hore laakiin taasi shaki la’aan waxay ka kooban tahay laba tusaale oo cad oo ah kuwa ugu fiican smartwatches-ka Shiinaha, runtiina, mar hore ayaan uga hadalnay munaasabad.
Waxaan ku bilaabaynaa tan LEMFO LEM5, saacad ka mid ah muuqaal adag iyo naqshad wareegsan leh saddex badhan oo dhinaca ah oo ina xusuusinaysa in badan oo ka mid ah saacadaha nolosha. Waxay bixisaa shaashad 1,39-inch IPS ah iyo xalka 400 x 400 halka wadnaheeda ay ku hayso Mediatek MTK6580 processor oo ay weheliso 1 GB oo RAM ah iyo 8 GB oo keyd ah gudaha ah sidaa darteed waxaad had iyo jeer qaadi kartaa qadar fiican oo muusiko ah. Culeyskiisu waa 89 garaam oo keliya, oo ku filan inuu bixiyo a 450 mAh baytariga y 3G isku xirnaanta markaa waad ku isticmaali kartaa banaanka taleefankaaga casriga ah. Waxa kale oo ku jira GPS, dareemayaasha garaaca wadnaha, iyo wixii la mid ah. Sida iska cad, waa saacad tayo iyo waxqabad aad uga sarreysa kuwii hore, in badan oo ka mid ah safka No.1 D5 + ee aan ku bilownay xulashadan sidaas darteed, qiimaheedu sidoo kale wuu ka sarreeyaa.
Dharka dharka King KW88
Khad la mid ah kii hore ayaan ku aragnaa tan Wax alaab ah lama helin. Si kastaba ha noqotee, qaabkani xoogaa wuu ka liitaa waxqabadka marka loo eego Lemfo Lem5 maadaama uu ku yaal badh RAM iyo keydinta gudaha, 512 MB iyo 4 GB siday u kala horreeyaan. Waxay sidoo kale bixisaa madax-bannaanida waxoogaa yar, 400 mAh baytariga laakiin uu raalli ka yahay isagu wuxuu leeyahay 2 MP kamarad iyo culeys kaliya 65 garaam oo xoogaa fudud ka dhigaya. Processor-ku waa isku mid, Mediatek MTK6580 isna wuu leeyahay isku xirnaanta mobilada.
Haddii lagu daro utility waxaad raadineysaa xarrago, tan Rwatch R11 Waad xiran kartaa xafladaha aroosyada iyo shirarka adigoon qaraxa bixin. Sida aad arki karto, waxay bixisaa naqshad aad u taxaddar leh, oo leh qaab caadi ah oo qurux badan iyo suunka. Waxay u egtahay muuqaal Moto 360 waxaana ka mid ah astaamo muggeed oo wanaagsan oo ku filnaan doona inta badan isticmaalayaasha. Gudaha waxaa ku jira processor Mediatek MTK2501, 128 MB oo RAM ah, 64 MB oo ROM ah oo lagu taageerayo microSD ilaa 32 GB, NFC, Bluetooth isku xirnaanta, 3.0 mAh batteriga, dareeraha garaaca wadnaha oo la jaan qaadaya iPhone iyo Android. Dabcan, taxaddar maxaa yeelay MA AHA biyuhu.
Waan hubaa in saacadani aysan wax kula mid ah kuu ahayn, si kastaba ha noqotee waxay leedahay naqshad aan jeclahay (gaar ahaan madow) iyo qiimo ka jaban, kaliya in ka badan konton euro. Waxay ku saabsan tahay Xakamaynta KW18, Naqshadeynta wareega ee smartwatch-ka Shiinaha oo culeyskeedu yahay 68 garaam oo keliya, saddex dhammeystiran, shaashad 1,3-inji ah, processor Mediatek MTK2502 oo ay wehliyaan 64 MB oo RAM ah, Bluetooth 4.0, 340 mAh batteri, garaaca garaaca wadnaha, oo la jaan qaadaya macruufka iyo Android, biyo-mareenka, isku xirnaanta mobilada, waxay taageertaa kaarka microSD.
Waa wax iska caadi ah marka aan ka hadlayno smartwatches-ka Shiinaha (ama wax soo saar kale oo Shiine ah) waxaan u maleyneynaa inaan si toos ah uga fikirno alaab tayo jaban oo liidata, si kastaba ha noqotee, sida aan aragnay, tani waa aaminaad caan ka ah xaqiiqda. In kasta oo ay run tahay in smartwatches-ka Shiinuhu guud ahaan ka raqiisan yihiin, haddana kala duwanaanshaha qiimaha iyo tayada sidoo kale waa mid aad u ballaaran Markaa furaha ayaa ku jira ogaanshaha waxa aan u adeegsan doonno saacaddeena casriga ah, haddii aan siineyno adeegsi maalinle ah oo aad u xoog badan, haddii aan u baahanahay inay si madax bannaan uga shaqeyso taleefannadeenna casriga ah, iyo wixii la mid ah.
Waa maxay smartwatch Shiinaha liiska ma ku dari lahayd?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Saacadaha ugu fiican Shiinaha
Waxaan ku dari lahaa bizka ama xawaaraha amazift-ka kuwaas oo ah saacadaha isboortiga oo leh qiimo wanaagsan GPS
Oo meeday Domino DM368 Plus? ama Finow X5 AIR? ...
Maqaalkani wax yar oo cilmi-baaris ah ayaa ka maqan.
Ku jawaab IMN
KW18 ku qoran maahan asalka, waa KingWear k1w8
Ku jawaab Ivo
Lemfo kW 10, waxaan jeclaan lahaa inaan awood u yeesho inaan wax ka badalo mise waad awoodaa? Waxaan weydiiyaa?
malaa'igta dooxada dijo
Waxaan raadinayaa SmartWatch, oo aan ka ahayn APPLE…. leh ECG -Electrocardiogram- (caafimaad ahaan la xaqiijiyay) Waan ogahay in Xiaomi ay leedahay mid leh shaqadan oo u eg sida Samsung ...
Waad ku mahadsantahay boggaaga wanaagsan.
Ku jawaab angel del valle
4G Smartwatch oo kaarka SIM ah "ma bixin kartaa internetka" tusaale kombuyuutar sida Mac mini oo loo maro Wi-Fi?.
Taasi waa, haddii 4G Smartwatch leh kaarka SIM, waxaad sameyn kartaa isla sida taleefanka oo kale.
Jay Y. Lee, madaxweyne ku xigeenka Samsung, waxaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah
Google Pixel 2 wuxuu horey u haystay taariikh sii deyn wuxuuna ku imaan doonaa Snapdragon 836